‘थिंक ट्यांक २०२२’को स्थापनाको घोषणा - Naya Online
सोमवार, बैशाख २७, २०७८ (May 10th, 2021 at 10:50am ) विश्व
बानले यसलाई लामो समयदेखिको बाँकी रहेको एक पहलको रूपमा उल्लेख गरेका थिए। उनी आइतबारको छैटौं -याली अफ होप (आरओएच अन्तर्राष्ट्रिय) मा कोरियाबाट आइतवार, मे,९, २०२० मा प्रसारण गरिएको कार्यक्रममा प्रत्यक्ष बोलेका थिए। उनले स्वीकार्दै भने– “ थिंक ट्यांक २०२२ लाई लक्ष, नेतृत्व, अथक परिश्रम र समर्पण चाहिन्छ, यो कुनै साधारण काम होइन।”
थिंक ट्यांक २०२२ युनिभर्सल पीस फेडरेशनको एक परियोजना हो जुन स्वर्गीय डा. सन म्योङ मुन र उनकी श्रीमती डा. हाक जा हान मुनद्वारा स्थापित छ, जसले वर्तमानमा यस विश्वव्यापी अभियानको नेतृत्व गरेका हुन्। यूपीएफका संस्थापकहरू दुवै वास्तवमा उत्तर कोरियाबाट आएका हुन्। उत्तरमा भएको शासनसँग उनीहरूको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ जुन ३० बर्ष अघि विकसित भएको थियो जब उनीहरूले प्योंगयांगमा उत्तर कोरियाका संस्थापक र राष्ट्रपति किम इल सुंगलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटे। यसको मतलब यो कामका लागि यूपीएफ आदर्श रूपमा अवस्थित छ ।
आरओएच ६ कार्यक्रम १९४ राष्ट्रहरुमा दस करोडौं को दर्शकहरुमाझ पुगेको छ । मिडिया प्रिन्ट, इलेक्ट्रोनिक र इन्टरनेट लगायत विश्वभर १७६ प्रसारण केन्द्रहरुमार्फत प्रसारण भएको कुरा , डा. मुनको सचिवालयका अन्तर्राष्ट्रिय मुख्यालयका महासचिव एवं -यालीका प्रुमुख डा. युन योङ हो ले बताउनुभएको छ । प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरुमा दुई वर्तमान राष्ट्र प्रमुख, दुई नोबेल पुरस्कार विजेता र एस्ट्राजेनेका कोभिड १९ खोपको मुख्य विकासकर्ता मध्ये एकजना सम्मिलित थिए।
विशेष रूपमा, प्रमुख वक्ताहरू थिए सामदेक हुन सेन, प्रधानमन्त्री, कम्बोडिया,मोहम्मद बाजुम, राष्ट्रपति, नाइजर, माइक पेन्स, उप–राष्ट्रपति, अमेरिकी संयुक्त राज्य, माइक पोम्पीयो, संयुक्त राज्य अमेरिका सचिव, मार्क एस्पेर, संयुक्त राज्य सुरक्षा सचिव, जोसे मानुएल बारोसो, राष्ट्रपति, यूरोपीयन आयोग,डेभिड ब्यासले, कार्यकारी निर्देशक, युएन विश्व खाद्य कार्यक्रम ,प्रो सारा गिलबर्ट, सह–विकासकर्ता, अक्सफोर्ड भ्याक्सिन, न्युट गिनरिच, सभामुख, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधि सभा सम्बोधन गरेका थिए ।
-यालीको समापनमा डा.मूनले थिंक ट्यांक २०२२ को संकल्प पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि उहांले नयाँ शान्तिको पहलको शुभारंभको प्रतीकमा घण्टी बजाएका थिए । पाँच -याली अफ होपको श्रृंखला अगस्त २०२० बाट शुरू भयो र कोभिड–१९ महामारी, वातावरणीय विनाश , गरीबी र असमानता, जातीय र साम्प्रदायिक सम्बन्ध, र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता विभिन्न मुद्दाहरूको सम्बोधन गरेको छ । यूपीएफ परस्पर निर्भरता (पारस्परिक सम्मान, सहयोग, र हाम्रो साझा मानवताको मान्यता), पारस्परिक समृद्धि (चरम गरीबी घटाउने र मानव विकासमा प्रतिबद्धता), र विश्वव्यापी मूल्य मान्यताहरू (विश्वासमा आधारित साझा आधार जुन हामीले पार गर्दै छौं । को मूल आदर्शमा केन्द्रित छ जुन राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति, र जाति को सिमाभन्दा माथी छ ।
काबुल एयरपोर्ट विष्फोटको जिम्मा आइएसआइएसकेले लियो
एजेन्सी । पेन्टागन र अफगानिस्तानको जनस्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बिहिवार साँझ काबुल विमानस्थलको गेटमा दुई...
मेस्सीले आँसु पुछेको टिस्यू पेपर लिलामीमा, मूल्य ११ करोड
धरान । दैनिक प्रयोगमा आउने बस्तुहरु मध्ये संसारकै सबैभन्दा सस्तो बस्तुहरुमा टिस्यु पेपर पनि...
अफगानिस्तानको सरकार ढल्नुमा बाइडेन दोषी भन्दै ट्रम्पले मागे राजिनामा
काठमाडौ । अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन बाइडेनकाका कारण अफगानिस्तानबाट असरफ घानी नेतृत्वको सरकार परास्त भएको...
बाढी प्रभावित गाउँमा अवलोकन गर्न पुग्दा आफै फस्न पुगे गृहमन्त्री
भारत । बाढी प्रभावित गाउँमा रेस्क्यु अपरेशनको अवलोकन गर्न पुग्दा प्रदेशका गृहमन्त्री आफै फस्न...
बन्जी कर्ड नबाँधीकनै हाम्फालेपछि हृदयघात
काठमाडौँ, ९ साउन । बन्जी जम्प गर्ने क्रममा बन्जीको डोरी नबाँधीकनै हामफाल्दा उत्तरी कोलम्बियाको...
विश्वकै सबैभन्दा सानो देशका रुपमा दाबी गर्ने सील्याण्ड माइक्रो नेसन
काठमाडौं, ७ साउन । विश्वमा एउटा यस्तो देश छ जुन दुई पिल्लरमा टिकेको छ...